Hard drives yihiin qalabka jilicsan. Inkasta oo ay u muuqan qalabka hardware sida adag, wax yar taxadar ah waxay keeni kartaa disk adag in cillad ama ka xun, joojin oo shaqeeya wadajir. Halka sababta uu khasaaro xogta ku drives adag tahay inta badan jirka, mararka qaarkood ay sidoo kale sabab u tahay qalad kaliya aadanaha. Tusaale ahaan, formatting drive adag oo aan gurmad ah oo keeni kara in khasaaraha ka mid ah xogta qaali ah laga soo ururiyey in ka badan koorsada sano. Iyadoo kororka digitization xogta, macno ahaan oo dhan, xusuus our, noo emails muhiim iyo dhammaan macluumaadka shakhsiyeed waxa lagu kaydiyaa drives noo adag, sidaas darteed, qaabka noocan oo kale ah waxay noqon kartaa sifeeyo gaar ahaan marka aadan aqoon sida loo helo xogta oo dhan dib.
Ma Data weli Recoverable ka dib markii formatting drive adag?
Haa, macluumaadka recoverable ka dib markii formatting drive adag. Tan waxa u sabab sabab ah in nidaamka qalliinka, by default ma tirtirto dhammaan user tirtiray files ku meel gaar ah. Saas ma aha, files waxaa lagu hayaa in muddo ah, waxaana la tirtiray mar nidaamka qalliinka loo baahan yahay in meel files dheeraad ah oo dhawaan la tirtiro sameeyo. Ilaa iyo markaas, files kuwaas joogo ee xasuusta iyo in la soo kabsaday karaa iyadoo la isticmaalayo qalab kasta oo soo kabashada xogta. Sidaas, haddii aad shil formatted drive adag, aad leedahay qaar ka mid ah waqti ay ku xalliso. Isticmaalo waqtigan si aad u hesho gacmahaaga ku ah qalab kabashada xogta ku ool ah sida software Wondershare Data Recovery si uu kaaga caawiyo geedi socodka.
Waxyaabaha la sameeyo ka hor soo kabsaday ah drive formatted adag?
Waxaa jira waxyaabo ay tahay in maskaxda lagu hayaa haddii aad qorshaynaysid inuu ka soo kabsado xogta ka ah drive formatted adag. Maqaalkani waxa uu ku nuuxnuuxsaday dhan dos iyo SAAMEYN sida guusha wax kaqabashada xogta ay ku xidhan tahay, kuwaas oo tallaabooyin taxaddar ah oo fudud. Sidaa darteed, si ay u soo kabsadaan xogta ka ah drive formatted adag, waxaad u baahan tahay inaad samayso waxyaabaha soo socda:
Is ogow sida in aan wax ku drive ay adag tahay in aad rabto in aad soo kabsado files ka. Tani waa in la hubiyo in nidaamka qalliinka ma tirtirto faylasha tirtiray si joogto ah.
Hayso ku software ah soo kabashada xogta. Waxaa jira fursado fiican oo badan oo la heli karo ka kacay suuqa, laakiin waxaannu ku talinaynaa in la isticmaalayo software Wondershare Data Recovery baqdin tiro badan waafaqsan iyo noocyada file taageeray.
Sidee inuu ka soo kabsado formatted drive adag?
Wondershare Data Recovery Waa aalad kabashada xog muhiim u ah bilowga ah iyo dadka isticmaala khibrad labada. Sida magaca muujinaysaa, Wondershare Data Recovery caawin kara dadka isticmaala soo ceshano xogta lumay ama faylasha. Waxaa soo kaban karto, files in lagu tirtiro si shil ama kuwa ka lumay ay sabab u tahay formatting ee disk adag. Waxaa intaa dheer, soo kaban karto, files oo laga yaabo in la tirtiray sabab u ah fayrasyada. Wondershare Data Ladnaansho taageero dalabyada u imaanaya in ka badan 550 nooc file kaas oo qalab soo kabashada xogta anfacaya ka dhigaa. Wondershare Data Recovery Lagala soo bixi karaa http://www.wondershare.com/data-recovery/ .
Download iyo gashato Wondershare Data Recovery aad laptop ama computer. Burcad Wondershare Data Recovery mar rakibo waa dhameystiran yahay. Waxaad si toos ah loo gudbiyaa hab Wizard taas oo xitaa kuu ogolaanaysaa inaad dooro nooca xogta in aad rabto in aad soo kabsado. Dooro noocyada file in aad rabto in aad soo kabsado si waafaqsan baahida loo qabo. Haddii, si kastaba ha ahaatee, waxaad u baahan tahay nooc kasta oo xog ka soo kabsaday, si fudud u dooro "Dhammaan Noocyada File" oo ku dhacay "Next".
Next, Wondershare Data Recovery weydiin doonaa in aad dooratid nooc scan ku salaysan doorashadaada. Dooro "Enable Deep Scan" maadaama ay soo kabanayso files lumay ay sabab u tahay qaabka si fiican. Scan Tani waxay qaadan kartaa waqti ka mid ah, sidaa darteed ha argagixin. Dib u fadhiiso, nasato oo ha Wondershare Data Recovery sameeyo ay sixir.
Marka Wondershare Data Recovery waxaa loo sameeyaa baar wadid aad u adag, waayo, files laga badiyay, waxaa ku eegaan doonaan dhammaan natiijooyinka aad u. Waxaad markaa dooran kartaa faylasha la doonayo in aad rabto in aad soo kabsado baabi'inta baahida loo qubka tiro aad u badan oo ah xogta la rabin. Si fudud u dooro files in aad rabto in aad soo kabsadaan oo ku dhacay "Ladnaansho".
Jidkii toosnaa, inaan qaab drive adag
Waxaa jirta waddo dadka midig oo kaliya in ay qaab drive adag; inaad sameyso oo dhan si loo hubiyo in formatting la sameeyo xaq u sameeyo, iyo in aadan lumin wixii xog ah, had iyo jeer isticmaalaan qalab gurmad in ay dib u dhan xogta si aad u ah drive dibadda adag ka hor inta formatting wadid aad u adag. Sidaas dhammaan xogta aad ku sii jiri doonaa ammaan ah oo aan haysan doontaa in aad ka maraan dhibaato ah ee ka dib ka soo kabanaya waxaa.
> Resource > Hard Drive > Sidee inuu ka soo kabsado files ka formatted Hard Drive?